ကျောင်းမှာ စာညံ့တဲ့သူတွေက ဘာကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်တတ်သလဲ? ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:20 PM | No မှတ်ချက် | Barlarlar
ကျောင်းမှာ စာတော်ရဲ့သားနဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ထင်သလောက် ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့သူတွေ။ ကျောင်းမှာတုန်းက စာညံ့ပြီး တကယ့်လူမှုဘဝထဲရောက်မှာ ထိပ်တန်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းစာမှာ အားနည်းရဲ့သားနဲ့ ဘဝမှာ ဘာလို့အောင်မြင်တတ်သလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ဆီမှာ စာတော်တဲ့သူတွေ၊ သာမန်သူတွေထက် အားသာချက်တစ်ချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။
၁။ သူတို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စောစောစီးစီးသိတယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့။ ကျောင်းမှာ စာတော်တဲ့သူတွေ၊ သာမန်သူတွေဟာ ကျောင်းစာမှာပဲ နပန်းလုံးနေလေ့ရှိပါတယ်။ တော်တဲ့သူက အဆင့် ၁ ရအောင်၊ သာမန်လူက စာမေးပွဲအောင်ဖို့နဲ့ အမှတ်ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေချိန်မှာ စာမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အာရုံမှာ ကျောင်းစာထက်စာရင် အပြင်ကိစ္စတွေ၊ ဗဟုသုတတွေကို စိတ်ဝင်စားနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဟာ ဘာလဲဆိုတာကို သူများတွေထက် စောစောစီးစီး သိလေ့ရှိပါတယ်။ (ဥပမာ- လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတာတို့၊ ဂီတတွေ၊ ပန်းချီတွေကို ဝါသနာပါတာတို့)
၂။ သူတို့ဟာ ကျောင်းနေအရွယ်ကတည်းက အတွေ့အကြုံများတယ်။ စာတော်တဲ့သူတွေက ကျောင်းကနေ ကျူရှင်၊ ကျူရှင်ကနေ Guide၊ Guide ကနေ စာကြည့်စားပွဲကို ကူးချီသန်းချီလုပ်နေချိန်မှာ သူတို့ကတော့ အားလပ်ချိန် များစွာရနေပါတယ်။ စာတော်တဲ့သူတွေက စာကလွဲပြီး ဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ကိစ္စပေါင်းများစွာကို လေ့လာသင်ယူပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေဟာ ဘဝကိုတကယ်တမ်း လျှောက်လှမ်းရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အတွက် အားသာချက်တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
၃။ လူဝင်ဆန့်တယ်။ သူတို့ဟာ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုပေါင်းသင်းရမလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းလည်း များပါတယ်။ လူတွေနဲ့ အသားကျစွာ နေတတ်တဲ့အကျင့်က စာမှစာပဲသိတဲ့ လူတော်တွေထက်စာရင် အများကြီး တာသွားပါပြီ။
၄။ ဘဝကို နေပျော်အောင် နေတယ်။ စာတွေကျက်ရင်း ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ရှင်သန်နေရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွေးတွေလည်း ပိတ်လှောင်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ စာမေးပွဲရလဒ်တွေထက်စာရင် စိတ်ကိုပေါ့ပါးစွာ နေလေ့ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာနဲ့ စိတ်ကူးတွေလည်း ယဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းကအမှတ်တွေထက် ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို အဓိကကျလဲဆိုတာကို စာတော်တဲ့သူတွေထက် ပိုပြီး စောစော နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
၅။ အလွယ်နည်းကို ရှာတတ်တယ်။ သူတို့ဟာ Theory တွေ၊ ပုံသေနည်းတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်မနေဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားတတ်ပါတယ်။ ပြသနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ အဓိကလိုအပ်တဲ့ အဖြေကိုရဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘဝအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
၆။ အိမ်မက်တွေနဲ့ ရှင်သန်တယ်။ စာတော်တဲ့သူတွေဟာ ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကို တွေးဖို့ထက်စာရင် အမှတ်ကောင်းတဲ့အခါ ဆရာဝန်လုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ဆိုပြီး
ဘဝကို အမှတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သူတို့အားသာချက်၊ သူတို့ ဖြစ်ချင်စိတ်တွေပေါ်အခြေခံပြီး ဘဝကို အိမ်မက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ပါတယ်။ ဘဝကို အမှတ်နဲ့ သတ်မှတ်တဲ့သူနဲ့ ဘဝကို အိမ်မက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့သူတို့ ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုချင်းလည်း ကွာဟလာတတ်ပါတယ်။
၇။ ဘယ်အချိန်မှာ ရုန်းကန်ရမလဲသိတယ်။ စာညံ့ဖူးတဲ့သူတိုင်းဟာ လူပျင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့စိတ်မပါတဲ့ ကျောင်းစာမှာ အားနည်းတတ်ပေမယ့် သူတို့မှာ ဘဝနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြင်းပြခဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ရှိပါတယ်။ Credit;ရွှေညာမောင် (Focus Youth E-magazine)